Ipulasitiki ayinemfashini: abathengi basekela uboya bemvelo, isikhumba noboya
Isikhathi Iposi: Jun-07-2021
Ipulasitiki ayiyona imfashini: abathengi basekela uboya bemvelo, isikhumba kanye noboya F International Fur Association IFF May 19 Kungenzeka ukuthi uvele wafunda umbiko wengqungquthela yabezindaba onesihloko esithi "fur fur protection", futhi uyabubula "ngenqubekela phambili yezikhathi". Kepha singakwazi yini ...Funda kabanzi »
Imfashini eyodwa yohlobo lweMilano ephezulu futhi nabesifazane abakulungele ukugqoka umbukiso ngoFebhuwari 22-25, 2019 Owakamuva nje iMilano uzoba ngoFebhuwari 22 kuya ku-25, 2019 esethulweni se-fieramilanocity Exhibition: IMilano phambilini yayaziwa njengoboya obudumile emhlabeni imikhiqizo prof ...Funda kabanzi »
I-IFF yethula Isu Lokusimama - 'Uboya Bemvelo'
Ngu-furfashion ngoFebhuwari 17, 2020 Umkhakha woboya womhlaba wethule uhlelo lokuvelela kanye nomhlahlandlela ocacile wokuhamba komkhakha kanye nokuhlinzekwa okubanzi okuzungeze inhlalakahle yezilwane, ukuvikelwa kwemvelo kanye nabantu nemiphakathi esebenza kulo mkhakha ...Funda kabanzi »
I-Online Hong Kong International Fur Fashion Show ivula namuhla
I-International Fur Association NgoMashi 1, 2021, umbukiso omusha we-inthanethi waseHong Kong International Fur Fashion Exhibition uvulwe namuhla! IHong Kong Fur Industry Association yamukela abathengi abavela kuwo wonke umhlaba! IHong Kong Fur Industry Association ijabule kakhulu ukuthola ukuhalaliselwa ...Funda kabanzi »
Ulwazi loboya, izinhlobo eziningana zoboya obujwayelekile, iyiphi oyithanda kakhulu?
Bhala izinhlobo eziningana zoboya ezivamile kuwe 1, ikati leLynx Ikhiqizwa ikakhulukazi e-United States, Canada naseRussia. Nguboya obuhamba phambili obugcina ukufudumala okuqinile, kepha into ebaluleke kakhulu ukuthi ukukhanya okulula kakhulu noboya obubiza kakhulu. Ingxenye ebaluleke kakhulu ...Funda kabanzi »
I-IFF IVULA ISU LOKUQINISEKISA - 'NGOKWENDALO FUR' Ngu-furfashion ngoFebhuwari 17, 2020 Imboni yomhlaba yoboya yethule uhlelo oluvelele kanye nomhlahlandlela ocacile wokuhamba komkhakha kanye nokuhlinzekwa okubanzi okuzungeze inhlalakahle yezilwane, ukuvikelwa kwemvelo kanye ...Funda kabanzi »